DA- BW19002 cook iron cookware 2020 iib kulul
Digsiyada shiilan ee dhaqameed waxay u karin kartaa si aan dheellitirnayn, inta badan waxay keentaa hilib aad u adag in la cuno. Cusub oo la hagaajiyay! Isku-xidhka fiilooyinka ayaa u gooni ah kuleylka degdega ah iyo nadiifinta fudud. Ku tuur farqiga birta skillet-kaaga cusub oo si isku mid ah ugu fidiya kuleylka si fiican loo kariyey, hilib jilicsan oo dheeri ah. Waa macaan oo cagaar
Slim profile wuxuu qaadanayaa meel aad uga yar birta korantada.
DA-BW24002 dhalada birta wax lagu kariyo 2020 iibka kulul ee lagu sameeyay Shiinaha
DA-BW32001 dhalada birta lagu kariyo DISA
DA-BW18001 iron cast 2020 iibka kulul